ISIQITHI SEKANGAROO - Iyunithi yeHolide -1
Brownlow, South Australia, Australia
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJane
Sijonge ukubonelela ngeendleko eziphantsi ngendawo yokuhlala yentsapho kwindawo entle.
Iyunithi ibekwe kwindawo ezolileyo enendawo yogcino echasene nekhaya le-wallabies kunye nezinye izilwanyana zasendle.
Kukho ikhitshi elizimeleyo, indawo yokutyela, kunye nendawo yokuhlala eneTV enkulu kunye nesidlali seDVD.
2 ubusuku obuncinci bokuhlala
Kukho ikhitshi elizimeleyo, indawo yokutyela, kunye nendawo yokuhlala eneTV enkulu kunye nesidlali seDVD. Ukulala kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kwaye kwenye indawo i-futon ephindwe kabini enebhedi enye ngaphezulu.
Indawo yangasemva ibucala kunye ne-bbq kunye nendawo yokuhlala yangaphandle. Iingcingo zikhuselekile okwenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokuhlala.
Kukho indawo yokuhlamba impahla.
Nangona iyunithi iyimizuzu emi-5 kuphela yokuqhuba ukusuka e-Kingscote nazo zonke izinto eziluncedo, ikwindawo ethe cwaka efihlakeleyo enendawo yokukhuhla echaseneyo. Kukho izilwanyana zasendle kunye neentlobo ezininzi zeentaka zemveli eziza kubonwa.
Imizuzu emi-5 yokuqhuba kukho iivenkile zekofu, ivenkile enkulu, iihotele kunye neeresityu. Ulwandle luhambo olufutshane kakhulu, indawo ezolileyo apho unokuhamba khona iikhilomitha ezininzi.
4.52 · Izimvo eziyi-29
Iyunithi yimizuzu emi-5 kuphela ukusuka eKingscote apho kukho iindawo zokutyela, iivenkile, iibhanki, ithala leencwadi njl. Izilwanyana zasendle zomthonyama neentlobo ngeentlobo zeentaka zomthonyama zininzi.
Umnini akakho. Iindwendwe zinikwa izalathiso ezicacileyo zokufumana indawo yeyunithi kunye nekhowudi yokutshixa ukufikelela kwisitshixo. Basenokukhala nangaliphi na ixesha ukuba banemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brownlow